M/weyne Museveni oo safar kedis ah ku tagey Muqdisho, kulamana la yeeshay madaxda dawlada Somaliya. – Radio Daljir
M/weyne Museveni oo safar kedis ah ku tagey Muqdisho, kulamana la yeeshay madaxda dawlada Somaliya.
Muqdisho, Nov 28 – M/weynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni ayaa safar kedis ah oo saacado qaatay ku tagay Muqdisho. Ujeedad safarka M/weyne Museveni ayaa lagu micneeyey in uu niyadda ugu dhisayo cidanka Uganda ka jooga Somaliya. Uganda ayaa waxaa ka jooga Muqdisho ciidanka ugu balaaran ee AMISOM, waana wadanka labeeya Burudi. M/weyne Museveni ayaa la sheegay in uu kulan wadatashi ah la qaatay M/weyne Shariif, R/wasaare Farmaajo, iyo Afhayeen Shariif Xasan ka hor intii aanu dib ugu laaban Kampala oo uu ka soo kicitimay.